Oromoon Ilaalcha adda adduma yoo qabatee ilee Oromummaa isaatiin wal hubanoo qabachuu qaba.
Oromoon dhuguma Bilisumma isaaf qabsa'uu diinati harka hin lanee, harkasi hin latuu, fakeenyaf ABO Eritrea keessa wagga hangasi yeeroo jirtan Oganni isaa harka hin lanee sababin isaa kan mana ba'aanfi Angoof ykn fayyidaf utuu hin tanee Bilisummaa Oromoof, kayyoo kanaatuu isaan to'ataa. Habashoon kan qabsoo kan egalanif horma garboonfachuuf, Angoo qabachuuf, fayyida dhufaa gutachuuf waan ta'eef yeero heeduu Eritrea irra Ogannoon dhabbilee akka Arbanyachii, Amhara, TPDN fi Ginbot 7 diinati harka latuu, sababin isaa erga Eritrea ga'aan booda fayyida isaan barbadan sun akka hin milkofne yeeroo barana qabsoo ganani baduu.
Mootumman Eritrea bara 1991 Oromoo achi dhibani TPLF Ethiopia akka dhunfatuu goodhan, isaa irra darban waraana ABO hanga Somaliati hordofan lolun biyya basan. Gaafa TPLF lola isaan irrati kachifte hanga Eritrea dhufatuu fi isaan baleesituti isaan loltu amoo dogogora isaan hubatan ABO degeruu egalan. Haata’uu malee Eritrean ABOn akkan Ethiopyuma fudhau dhiiba cimma irrati goocha turte irrati goocha jirti. Ertrean QBO Oromoo jabeesu dhiifte Amasi dogogora ishee dura hojeete dabalun ABO irrati Tigire of jalati ijarachuu isheen waqii Oromoo Shabiya saxilee, Oromoon QBO fi haqa Oromoof falmachuu mana bayee yoomi ilee harka latee hin beeku, gantuu ergamaf ABOti makamtee yoo ta'ee malee. Shabiyan haqa Oromoon falmatuuf kana dhaabbatee gargarasa haqa goochuuf qaba ture, amasi garboonfatoota Oromoo irrati ijaruu dhisee.
Durata’an TPDN Mola Asagdom yeero Asmara turti TPLF waliin harka lafa jalan wal qunamti qabacha turan TPLF dhabbilee hunda Terorist jeedhe yeero mogasee TPDN maqa hin xunee. TPDN ilee yeero murtessati TPLFti galee jarii wal beekuu. Wari BADN (ብአዴን) ilee Ginbot 7, Samayawi Party waliin qunamti qabu. Kanaaf waan hunda yeero dubatan of qusatuu, dhoksan wal qunamuu. BADN waliin tokko ta’aan TPLF fonqolchan siirana Amhara deebisuuf deemuu. Habashoon Ala jiran Samayaw Party biyya keessati fi Ginbot 7 Eritrea keessati ijara jiran siirna kaleessa deebisuuf murtefatan jiru. Shabiyan Amoo TPDN fi Ginbot 7 farda qoodhatee Ethiopa akka barbadeeti bulchuuf waan hunda goodha jira.
Oromoo saamuuf waan ta’eef dhaabbilee Oromoo amoo lamishesa jira malee haqan garagara hin jiru, Shabiyan, TPLF fi dhaabbilee Amhara Oromoo yoomi ilee wara gargaran miti, yoo balessan malee. Kanaafu jari lachuu Oromoo baleesuuf waan deema jiranf Oromoo of ilaaluu qaba. Oromoon ilee akkuma ilman Habasha kan damaqee guyya yoo wall ole halkan araramuu qaba. Waan irrati wal galuu irrati waliin hojeechuu qaba. Fakeenyaf Wayee Murte TPLF Maaster Plaani Nannoo Finfinnee irrati Oromoo hundi tokkuman mormata jira ogannoota OPDO dabalatee. Waan irrati waliin hin galee obsa fi wal qusachuun irrati mari’achuu fi wal falmuu qaba malee mana wal irra cufatee ta’uu hin qabuu, Mari’achuu, wal gafachuu, wal hiyafachuu qaba, Haqii Oromoo yeeroo samamuu irrati falmachuu, Misooma Oromiyya keessati gegefamuu degeruu tumsuu qabna. Wal irrati ololuu qoofan isaanu iyuu nu hin ga’uu wal jalachuun bu’aa qaba.
Akuma TPDN Eritrea iraa gara TPLF galuu OPDO irra ilee kuno nami akka Intarpiraasii Hojiiwwan Bishaanii fi Deeszayinii Oromiyaatti ogeessa olaanaa kan taé, Daawiit Galataa amoo baqate Mormitootati makama jira. Oromoon garuu namoota isaati baqatan ilee seeran siimatee marisise itti fayadamuu hin beeku. Medialeen Oromoo ilee Gaafi fi deebi Oromiyaa fi haalaa Oromoo biyya keessa gaafachun, akkasumas bakka hojeecha tureti rakko Oromoo irra fi isaa irra ga’ee, yakka mootummaan TPLF Oromoo irrati raawwatuu balinan gaafachun seenaf ol ka’uu utuu danda’aan waan hin tanee gaafi Oromoo hin fayadine fi Mootumma sana ilee saxiluu hin dandeenye gaafachun bira darbuu. Kanaafi Gazzexeesitoon Oromoo waan bayee barachuu qabu, biya ala kana keessa jiratan waan mootummaa kana saxiluu gura uumataan ga’uu diidisun mootummaa namanyata kanaaf loguu nuti fakata. Median Oromoo ilee harka diaspora Oromoo jala jiran Diaspora Oromoo amoo dhigaa fi lafe baratoota Oromoo irra dhabatee yeeroo TPLF waliin shubisuu argine jira. Kun amo wal amanta waan nu dhabiseef Hayyuleen Oromoo marii haawwasa Oromoo waltajii gudaa tokko umudhan oromoo wal dukka luceesuu qabu jeena.